1 ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာဖြစ်ပါသည်: http://downloadfacetime.com
1.1.5 အခြားသော website ကနေ embedded အကြောင်းအရာ
1.3 အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါတို့သည်သင်တို့၏ data တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား
1.4 သင်သည်သင်၏ data ကိုကျော်ရှိအဘယ်အရာအခွင့်အရေးများ
1.5 ငါတို့သည်သင်တို့၏ data ပို့ဘယ်မှာ
1.7.1 ငါတို့သည်သင်တို့၏ data တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လို
1.7.4 အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချနှင့် / သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ user data ကိုပြုသဖြင့်, ကို automated
ဧည့်သည်များ site ပေါ်တွင်မှတ်ချက်များကိုစွန့်ခွာတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကမှတ်ချက် form မှာပြထားတဲ့ဒေတာစုဆောင်း, နှင့်လည်းဧည့်သည်ရဲ့ IP လိပ်စာနှင့် browser ကိုအသုံးပြုသူအေးဂျင့် string ကိုအကူအညီတောင်း spam များကိုထောက်လှမ်းရန်.
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကနေဖန်တီးတစ်ခုအမည်ဝှက် string ကို (ထို့အပြင်တစ်ဦး hash ကိုခေါ်) သင်ကကိုအသုံးပြုနေလျှင်ကြည့်ရှုရန် Gravatar ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးစေခြင်းငှါ. အဆိုပါ Gravatar ဝန်ဆောင်မှု privacy ကိုမူဝါဒကဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်: https://automattic.com/privacy/. သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်၏ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်, သင်၏ပရိုဖိုင်ပုံကသင်၏ထင်မြင်ချက်များ၏အခြေအနေတွင်အများပြည်သူမြင်နိုင်သည်.
သငျသညျဝက်ဘ်ဆိုက်မှပုံရိပ်များ upload တင်ပါလျှင်, သငျသညျ embedded တည်နေရာဒေတာတွေနဲ့အပ်လုဒ်တင်ပုံရိပ်တွေကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ် (EXIF GPS စနစ်) ပါဝင်သည်. ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဧည့်သည်များဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပုံရိပ်တွေကနေမဆိုတည်နေရာဒေတာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး extract နိုင်ပါတယ်.
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site ပေါ်တွင်မှတ်ချက်စွန့်ခွာလျှင်သင်ရွေးချယ်-in ကိုစခွေငျးငှါသင်တို့၏နာမချွေတာဖို့, cookies များကိုအီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်က်ဘ်ဆိုက်. သင်အခြားမှတ်ချက်စွန့်ခွာလာသောအခါနောက်တဖန်သင်၏အသေးစိတျထဲမှာဖြည့်ရန်မလိုပါကြောင်းဒါကြောင့်၎င်းတို့သည်သင့်အဆင်ပြေများမှာ. ဤရွေ့ကား cookies များကိုတစ်နှစ်ကြာရှည်ဦးမည်.
သငျသညျအကောင့်တစ်ခုရှိသည်နှင့်သင်သည်ဤ site ကို log in အကယ်., သင့် browser cookies တွေကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်ရန်ယာယီ cookie ကိုထားမည်. ဤသည် cookie ကိုအဘယ်သူမျှမကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါဝင်သည်နှင့်သင်သည်သင်၏ browser ကိုပိတ်လိုက်သောအခါအစွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်.
သငျသညျကို log in လိုက်တဲ့အခါ, ငါတို့သည်လည်းသင်၏ login သတင်းအချက်အလက်များနှင့်သင့်မျက်နှာပြင် display ကိုရွေးချယ်မှုကယ်ဖို့အတော်ကြာ cookies များကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်. နှစ်ရက်နောက်ဆုံး login cookies တွေကို, တစ်နှစ်နောက်ဆုံးနှင့်မျက်နှာပြင်ရွေးချယ်စရာ cookies တွေကို. သငျသညျကို select ပါလျှင် "မှတ်မိ", သင်၏ login နှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့ဆက်လက်ရှိပါလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏အကောင့်ကနေ log out အကယ်., ရဲ့ login cookies များကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်.
သငျသညျတခုဆောင်းပါးကိုတည်းဖြတ်သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန် အကယ်., တစ်ဦးအပိုဆောင်း cookie ကိုသင့် browser ထဲတွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်. ဤသည် cookie ကိုအဘယ်သူမျှမကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါဝင်သည်နှင့်ရိုးရှင်းစွာသင်ရုံ edited ဆောင်းပါး၏ post ကို ID ကိုညွှန်ပြ. ဒါဟာအပြီးကုန်ဆုံး 1 နေ့.
အခြားသော website ကနေ embedded အကြောင်းအရာ
ဒီ site ပေါ်တွင်ဆောင်းပါးများ embedded အကြောင်းအရာပါဝင်နိုင်ပါသည် (e.g. ဗီဒီယိုများ, ပုံရိပ်တွေ, ဆောင်းပါးများ, စသည်တို့ကို). အဆိုပါဧည့်သည်အခြားက်ဘ်ဆိုက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးမူလျှင်အဖြစ်အတိအကျတူညီလမ်းအတွက်အခြားသော website ပြုမူနေကနေ embedded အကြောင်းအရာ.
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များသငျသညျအကွောငျးကိုဒေတာစုဆောင်းစေခြင်းငှါ, cookies များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်, အပိုဆောင်း Third-party ခြေရာခံခြင်းတွေကို embed, နှင့် embedded အကြောင်းအရာနှင့်သင်၏အပြန်အလှန်စောင့်ကြည့်, သငျသညျအကောင့်တစ်ခုရှိသည်နှင့်ကြောင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာအတွက် logged နေကြသည်လျှင် embedded အကြောင်းအရာနှင့်သင်၏အပြန်အလှန်ခြေရာခံအပါအဝင်.
သင်တစ်ဦးမှတ်ချက်စွန့်ခွာခဲ့လျှင်, မှတ်ချက်နှင့်၎င်း၏ metadata ကိုသတ်မရှိထိန်းသိမ်းထားကြသည်. ကျနော်တို့အစားဖြည့်ညှင်းတန်းစီ၌သူတို့ကိုင်ထား၏အလိုအလျှောက်မည်သည့်နောက်ဆက်တွဲမှတ်ချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အတည်ပြုနိုင်အောင်ဤသူကားအ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်ကြောင်းအသုံးပြုသူများအတွက် (ရှိလျှင်), ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်အတွက်ပေးသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းသိုလှောင်. အားလုံးအသုံးပြုသူများကိုမြင်နိုင်ပါသည်, ပြင်ဆင်ရန်, သို့မဟုတ်မည်သည့်အချိန်တွင်မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖျက်ပစ် (သူတို့အသုံးပြုသူအမည်ကိုမပြောင်းနိုင် မှလွဲ.). ဝက်ဘ်ဆိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည်လည်းသတင်းအချက်အလက်သိမြင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ရန်နိုင်ပါတယ်.
သင်ဤ site ပေါ်တွင် account တစ်ခုရှိပါက, သို့မဟုတ်မှတ်ချက်များကျန်ကြွင်းစေပြီ, သငျသညျအကြှနျုပျတို့သညျအကွောငျးကိုကိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏တစ်တင်ပို့ဖိုင်ကိုလက်ခံရရှိရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့အားပေးကြပါပြီမည်သည့်ဒေတာများအပါအဝင်. သင်သည်လည်းငါတို့သင့်အကြောင်းကျနော်တို့ကိုကိုင်ထားမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖျက်ပစ်ကြောင်းတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. ဒါကကျနော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးအဘို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်တာဝန်ရှိကြောင်းနေကြသည်ဆိုဒေတာများမပါဝင်ပါ, ဥပဒေရေးရာ, သို့မဟုတ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များ.
ဧည့်သည်မှတ်ချက်များကိုအလိုအလျောက် spam များကိုထောက်လှမ်းဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် check လုပ်ထားစေခြင်းငှါ.
အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချနှင့် / သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ user data ကိုပြုသဖြင့်, ကို automated
ဂီတအဘို့လုပ်နိုင်တဲ့သင်ဟာအသုံးပြုမှု Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖုန်းမရှိရင်